Otu esi etinye desktọpụ Unity na Ubuntu 21.10 Imish Indri - LinuxCapable
Otu esi etinye Desktọpụ Unity na Ubuntu 21.10 Imish Indri
October 27, 2021 October 15, 2021 by Jọshụa James
Wụnye gburugburu Unity Desktop
Nwụnye kacha nta:
Nwụnye zuru oke:
Lelee mbụ & Nyochaa Desktọpụ ịdị n'otu
Otu esi emelite Unity Desktop
Otu esi ewepu (wepu) Unity Desktop
Environment Desktọpụ Unitydị n'otu bụ shei eserese maka gburugburu desktọpụ GNOME nke Canonical mepụtara maka sistemụ arụmọrụ Ubuntu. Ka oge gafere na Ubuntu na-eji GNOME ugbu a dị ka ebe desktọọpụ ndabara, ndị Unity7 Maintainers na UBports na-edobe ya ma mepụta ya.
Ebe a na-ahapụ Ubuntu 21.10, gburugburu Unity Desktop ọzọ ejirila ya. Ntọhapụ a ka na-eji interface Unity 7 dị ka UnityX 10 ka na-etolite. Agbanyeghị, na mwepụta nkesa Ubuntu ọzọ, ihe ịrụ ụka adịghị ya na interface a ga-apụta. N'ozuzu, ịdị n'otu bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ọsọ ya, ọzọ na-ele anya na-emegide gburugburu Desktop ọ bụla ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye Unity na Ubuntu 21.10 na nhọrọ dị iche iche.
OS akwadoro: Ubuntu 21.10.
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Desktọpụ ịdị n'otu nwere nhọrọ nrụnye atọ nwere ntakịrị, ọkọlọtọ ma ọ bụ zuru oke. Onye ọ bụla nwere uru na ọghọm dabere na ihe ị na-achọ isi na desktọpụ ahụ pụta. A ga-akọwa nkọwa dị nkenke na nhọrọ ọ bụla.
Nrụnye kacha nta dabara adaba maka nnwale, yana ịnwe obere ngwaike, ngwaike ochie ga-erite uru na ụdị a. N'ozuzu, nha bụ 76MB iji budata, yana ohere 280MB ọzọ achọrọ ma emechaa.
Nrụnye ọkọlọtọ Unitydị n'otu bụ ihe akwadoro maka nkezi onye ọrụ desktọpụ chọrọ usoro nguzozi. N'ozuzu, nha bụ 250MB iji budata, yana ohere 820MB ọzọ achọrọ ma emechaa.
Nke a na-abịa na ihe niile dị ka nrụnye zuru oke, mana ọ ga-agbakwunye bloat, na-emetụta usoro ndị agadi na-enweghị ego zuru oke. Agbanyeghị, sistemụ ọhụrụ agaghị enwe mmasị na nrụnye a ebe ọ ga-agbakwunye ọtụtụ ngwa ha agaghị eji, dị ka firebird, jackd2 na ndị ọzọ.
N'ozuzu, ị ga-achọ ibudata 2GB dị egwu, yana 15GB nke ohere ọzọ achọrọ. Ọ gwụla ma ịchọrọ nrụnye a n'ụzọ doro anya, a na-adụ ọdụ ka ịrapara na nrụnye ọkọlọtọ.
Nkuzi a ga-etinye ngwugwu ọkọlọtọ. Usoro a mara mma nke ukwuu maka ihe niile nwụnye nhọrọ.
Na-esote, n'oge echichi, ị ga-ahụ na-esonụ ozugbo window.
Dị ka mmepụta n'elu kwuru, ozi a na-agwa gị maka onye njikwa ngosi ịhọrọ. Maka Desktọpụ Unity, nke a ga-abụ "lightdm". Pịa "TAB" igodo ịhọrọ ma pịa gị "Tinye igodo" aga n'ihu.
Ozugbo emechara, ị ga-achọ ịmalitegharị sistemụ gị ka mgbanwe ọhụrụ ahụ wee malite.
Malitegharịa site na ịpị iwu a:
Ozugbo ịmaliteghachi usoro Ubuntu gị, ị ga-ebu ụzọ bịa na ihuenyo nbanye ọhụrụ nke dịtụ iche na nke gara aga.
Abanyela ozugbo. Nke mbụ, ịkwesịrị ịlele gburugburu desktọpụ. A na-eme nke a site na ịpị bọtịnụ nhazi na akuku aka nri elu nke mpio nbanye, n'aka nri nke gị aha njirimara, na ịhọrọ "Otu" kama "Ubuntu (nke ndabara)".
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ mgbanwe UI ole na ole ma e wezụga mgbanwe ndabere ndabere pụtara ìhè. A na-agbanwe ụlọ ọrụ ahụ ka ọ dị ka nke ọma, yana mpio ngwa anaghị ewelite ihuenyo dum, yana mgbakwunye ndị ọzọ na akuku aka nri elu nke ọrụ ebe ngosi oge dị.
Iji kwado nrụnye, ngwugwu dị mma ịwụnye bụ Screenfetch. Iji tinye ngwungwu a, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Ozugbo arụnyere, gbanye iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Dị ka mmepụta n'elu gosiri, ị tinyela Unity 7.5.1 nke ọma na Ubuntu 21.10 Imish Indri.
Maka mmelite n'ọdịnihu maka desktọpụ Unitydị n'otu na ngwungwu sistemụ Ubuntu 21.10, gbasoo iwu dabara adaba.
Mgbe mmelite dị, ọ bụ otu usoro iji kwalite.
Iwepụ gburugburu Desktọpụ nwere ike ịdị aghụghọ. Ọ dabara nke ọma, ịdị n'otu na Ubuntu dị ọcha karịa ụfọdụ nchikota desktọpụ na nkesa ndị ọzọ.
Iji wepu ịdị n'otu, jiri iwu na-esonụ.
sudo apt purge unity-session unity -y
Ozugbo emechara, wepụ ngwugwu na-adịghị mkpa.
Ọzọ, ị ga-elele na "gdm3" wụnye ọkwọ ụgbọala ngosi na ngwugwu ya. Site na ndabara, nke a ka kwesịrị ịdị na sistemụ gị, mana ọ dị mma ịlele.
sudo apt install ubuntu-session gdm3 -y
Mgbe ị ka nọ na ọdụ, pịnye iwu a ka ịmalitegharịa sistemụ gị.
Mgbe ịlaghachi na ihuenyo nbanye, ọ bụrụ na ahọpụtabeghị GNOME, jiri aka họrọ ya ọzọ, ị ga-alaghachi na GNOME 40 ndabara.
Mara, dị ka ekwuru, iwepụ gburugburu desktọpụ nwere ike ibute enweghị ntụkwasị obi n'ọnọdụ ụfọdụ. Ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma n'oge nkuzi nkuzi, ma achọpụtara m na nsogbu nwere ike ime ma na-ebilite, na mgbe ụfọdụ ọ ka mma ịghara iwepụ gburugburu ebe obibi. Ijide n'aka na-akwado nkwado ndabere na mpaghara data ọ bụla dị oke mkpa bụ isi ihe.
N'ime nkuzi a, ị mụtala nke ọma ka esi etinye Unity Desktop. N'ozuzu, nkesa a bụ otu n'ime ihe kachasị dị ọcha, ejirikwa nke ọma na nke obodo na-akwalite. Ọ na-emetụta myirịta na ụfọdụ DE ndị ọzọ. N'ozuzu, nke a nwere ike ịbụ ịdị n'otu 7 ikpeazụ ka atụmatụ maka ịdị n'otu 10 ka na-aga n'ihu na a ga-atụ anya na a ga-ahụ ya na usoro ntọhapụ LTS na-esote Eprel na-abịa.
Categories Ubuntu Tags gburugburu Desktọpụ, Ubuntu 21.10 Impish Indri Mail igodo
Otu esi ebuli Ubuntu 21.04 ka ọ bụrụ 21.10 Imish Indri
Otu esi etinye MATE Desktop 1.26 na Ubuntu 21.10 Imish Indri